Maalinta Madaxbanaanida Somaliland 1960 - Wikipedia
Maalinta Madaxbanaanida Somaliland 1960
(Waxaa laga soo toosiyay Maalinta Madaxbanaanida (Maamulka Somaliland))
Maalinta Madaxbanaanida Somaliland
Maalinta Madax-bannaanida Qaranka Somaliland waa xus sanadle ah iyo ciidaha guud ee Somaliland iyo Soomaaliya oo lagu xuso ku dhawaaqistii madax-bannaanida ee Juun 26, 1960.  Dabayaaqadii qarnigii 19aad, dhulalkii maanta loo yaqaan Soomaaliya iyo Somaliland waxaa loo kala qaybiyey Ingiriiska iyo Talyaaniga . Intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, Somaliland waxaa ku soo duulay ciidammo Talyaani ah, laakiin Ingiriiska ayaa aakhirkii dib ula soo noqday gacantii. 
Heshiisyada iyo is-weydaarsiga waraaqaha ee u dhexeeya Dawladda Boqortooyada Ingiriiska iyo Waqooyiga Ireland iyo Dawladda Somaliland ee la xidhiidha helitaanka Madax-bannaanida ee dalka Somaliland 
Dagaalkii ka dib, British Somaliland wuxuu sii ahaaday maxmiyadii Boqortooyada Ingiriiska, laakiin waxaa la go’aamiyay in British Somaliland iyo Italian Somaliland loo midoobo sidii hal dal oo madax bannaan kadib muddo kala guur ah oo daba dheeraatay.
26-kii Juun, 1960-kii, British Somaliland ayaa xorriyadda qaadatay dwoladda Ingiriisa ka bacina 1-dii Luulyo-na, labadii gumeyste ee hore ayaa midoobay si ay u dhisaan Jamhuuriyadda Soomaaliya . Sannad-guurada labada munaasabadood ayaa hadda loo xusaa ciidaha guud ahaan Somaliland iyo Soomaaliya. 
Somaliland waa dowlad iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanideeda oo beesha caalamku u aqoonsan tahay ismaamul ka tirsan Soomaaliya. Dawladeedu waxay u tixgelisaa dhulka inuu yahay dhaxalka dawladnimada Somaliland, waxayna dooneysaa aayo-ka-tashiga Jamhuuriyadda Somaliland
Markey taariikhdu ahayd 26kii Juun 1960kii waxaa xoriyada qaatey Goboladii Soomaalida Waqooyi kuwaasi oo dagaal culus la galay gumaystihii Ingiriiska. Fagaaraha kheyriyada magaalada Hargeysa oo iskugu soo baxeen dad badan oo u dabaaldegayay guusha xoriyada ayaa waxaa masraxa gabay dhaxalgal ah ka tiriyey Cabdilahi Suldaan Timocade. Gabaygaasi waxaa loo yaqaanaa Kana Siib Kana Saar:
Maalinta 26ka Juun 1960kii waa maalin aad iyo aad u qiimobadan, waa maalintii Ingiriisku uu ka guuray Somaliland. Waxa ay aheed maalin farxad iyo rayrayni ay ku dheehantahay. Waa maalintii ay samaysantay dawladii da'da yarayd ee Somaliland (1960). Dawladani waxay jirtay 5 cisho oo kaliya, kadibna waxy midnimo la samaysay Soomaaliya oo iyaduna xorowday 1960 bishii 7aad 1dii. Midawga ay sameeyeen labada dawladood malin kadib ayuu fashilmay markii koonfurtu ay wada qaadatay xukunkii oo dhan.
Maalinta Xoriyada Somaliland
Dawladii Somaliland (1960)
"Nuqul Archive". Waxaa laga kaydiyay the original 2011-09-28. Soo qaatay 2021-01-15. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin) Cite error: Invalid <ref> tag; name "wardheernews.com" defined multiple times with different content
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Maalinta_Madaxbanaanida_Somaliland_1960&oldid=221779"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Oktoobar 2021, marka ee eheed 12:43.